Nwere ike ịkwado igwe kwụ otu ebe na akpaazụ? - Gba Ígwè
Isi > Gba Ígwè > Akpa azu paaki - a na - enweta azịza bara uru
Akpa azu paaki - a na - enweta azịza bara uru
Nwere ike ịkwado igwe kwụ otu ebe na akpaazụ?
KEDU IHE Ọ BỤ? ZED'O bụ nke izizi buru ibuigweenwe iken'ogige atụrụka nke gịazu paaki. O kwere omume n'ihi na ọkaibe Ọdịdị nkempịachiwiil na etiti. N'ihi ọdịdị ya, ọ na-ejidekwa ma na-echefu echefu.Ọkt 1 2016
Chọrọ ibufe ịnyịnya ígwè gị ma ọ bụ ịnyịnya ígwè gị n'ụgbọ ala mana ị nweghị akwa mkpuchi ụlọ ma ọ bụ na ị gaghị achọ iji akwa mkpuchi ụlọ. N'isiokwu a, m ga-egosi gị otu esi agbago igwe kwụ otu ebe ma ọ bụ igwe kwụ otu ebe n'ime ụgbọ ala, m ga-enyekwa gị ụfọdụ ndụmọdụ ma ọ bụrụ na ịnwe obere ụgbọ ala ka ị nwee ike dabara na ya yana ụfọdụ ndụmọdụ ga-esi nweta igwe kwụ otu ebe ma ọ bụ nke gị Can ' t emebi ụgbọ ala mgbe ị na-eme ya. Mana tupu m mee, ọ bụrụ na ịchọrọ ndụmọdụ ndị ọzọ gbasara ịgba ịnyịnya ígwè, ịnwere ike ịkwado GCN site na ịpị Idenye aha na akara ngosi mgbịrịgba ahụ. (Booming Music) Ka ọ dị ugbu a, ọtụtụ n'ime gị ga-amata otu esi eme nke a.
Ọ bụrụ na i nwebeghị, ma ọ bụ na ịmaghị nke ọma na ị na-emebi igwe kwụ otu ebe, isiokwu a ga - enyere aka. Ọ bụrụ na ị nwere nnukwu ụgbọ ala, dị ka ụgbọ ala ọdụ ma ọ bụ ụgbọ ala ọdụ ma ọ bụrụ na ị bụ onye America mgbe ahụ i nwere ike Ọ dị mfe. N'ihi na ihe ị nwere ike ime n'ozuzu ya bụ ịkwanye igwe kwụ otu ebe n'ozuzu ya ma ọ bụrụ na ị daa n'oche azụ.
Otu ihe bụ ijide n’aka na ị na-etinye igwe kwụ otu ebe n’elu dị ka m na-eme; nke ahụ pụtara na gia ebe a anaghị ezu ike ibu igwe kwụ otu ebe. Nke a nwere ike imebi ha. Ya mere, kpoo ya nke ọma.
Ma hụkwa na eriri igwe na agbụ anaghị ejide ya n'akụkụ ụgbọ ala ahụ, gbakwunyere na ọ bụ ezi echiche naanị ịnwe mpempe akwụkwọ ma ọ bụ akwa ochie ị nwere ike iji kpuchie igwe kwụ otu ebe, ọ dị mma maka nchekwa, mana ọ na-egbochi unyi ịnweta ebe ọzọ, oge ụfọdụ ịchọrọ? Tinyekwa mpempe akwụkwọ n'okpuru igwe kwụ otu ebe. M n'ozuzu mgbe niile nwere a di na nwunye nke Ibé akwụkwọ na azụ nke ụgbọ ala m. (egwu obi ụtọ) ma ọ bụrụ na ịchọrọ iburu ihe ndị ọzọ n'ụgbọ ala gị, dịka.
B. ormụaka ka ọ bụ naanị chọrọ? iji jiri oche azụ, ma ọ bụ ma eleghị anya, ụgbọ ala gị pere mpe karịa nke a. O nwere obere ogwe ma ọ bụ ogwe ma ọ bụrụ na ị si America.
Agam egosi gi otu esi eme ya na azu nihi na odighi nfe iwepu ya. Ma ọ bụrụ na ị hapụ ụkwụ azụ ya, ọ na - enyere aka ichebe ma ọ bụrụ na ịnwere ohere maka azụ azụ ntakịrị ma na - egbochi agbụ ahụ ịdapụ. Ugbu a iji wepu ụkwụ ihu, ma ọ bụrụ na ịnwere ntọhapụ ọsọ ọsọ dị ka igwe kwụ otu ebe a, ịnwere ike ịtọhapụ ngwa ngwa ntọhapụ.
Ma mgbe ahụ i nwekwara ike iji camon hapụ caliper breeki ebe a. Ọ na-abụkarị ihe dị ka nke a. Naanị ị gbanwere ya na nke a mepee breeki breeki ntakịrị, nke na-eme ka wiil ahụ dị mfe ịpụta.
Mgbe ahụ, m na-atụ aro iji nlezianya tinye wiilị ahụ n'otu akụkụ. na mgbe slide na igwe kwụ otu ebe dị na mbụ. Tụgharịa aka dị ka nke a, mana gbaa mbọ hụ na aka anaghị akụ elu tube.
Ya mere jigide aka ma ọ bụ azuokokoosisi nke igwe kwụ otu ebe. Tinyeghachi igwe kwụ otu ebe. Usoro kachasị mma maka ịme nke a bụ itinye igwe kwụ otu ebe n'ọnọdụ mbụ, dịka i mere na mbụ, wee debe ụkwụ ihu na igwe kwụ otu ebe.
Ma etinyela igwe kwụ otu ebe na igwe kwụ otu ebe n’ihi na nke a nwere ike ịkọ ya, ọkachasị ma ọ bụrụ na ọ na-amị amị mgbe ọ na-agba. Ya mere, tinye mpempe akwụkwọ n'elu ma tinye igwe kwụ otu ebe na nke ahụ kwesịrị ịdị mma iji kpuchido ya. Ọ bụrụ na ị nwere igwe kwụ otu ebe nwere diski breeki dị ka nke a, iwepụ wiilị ahụ dị mfe.
na-ege ntị music mgbe biking
Ha na-enwekarị thru axle. Ugbu a mgbe ụfọdụ ha nwere lever na thru axle dị ka nke a. Iji wepu wiilị ahụ, naanị ị gbanye ya, megharịa ya ma dọpụta ngwa ngwa na-agbapụta ngwa ngwa (axle zippers).
Ma mgbe ahụ, ị ​​nwere ike ibuli impeller. Agbanyeghị, ụfọdụ axles enweghị ụlọ na-akwụ ụgwọ na ha ma kama ha na-achọkarị igodo Allen, na-abụkarị 5 mils dị ka nke a. Mgbe ụfọdụ, ọ bụ 6 mils.
Mgbe ahụ ịnwere ike iji igodo Allen ma ọ bụ okpu hex iji wepụ axle ahụ n'ụzọ ahụ. Axle na wiilị gị pụọ, tinyeghachi axle gị n’ime igwe kwụ otu ebe. Ihe kpatara nke a bụ, nke ọma, na mbu, ọ na - enyere aka ịhazi ntụkwasị obi ntakịrị.
Ọ na - enyere aka mee ka igwe kwụ otu ebe dịtụ ntakịrị ike. Ma ọ na-egbochi gị ịhapụ ya. Ihe ndị a dị mfe ịhapụ.
Na ahụmahụ nke m, agara m ezumike mgbe m kpọpụsịrị ha ma hapụ ha n'elu ụlọ ụgbọ ala m. Ha anọghị ebe ahụ mgbe m ruru ebe ahụ. Ama m na ọ bụghị naanị m na-eme ụdị ihe a.
Adịla ka m. Debe ahịrị gị ebe ị na-agaghị efu ha. Mgbe ị na-etinye diski breeki n'azụ ụgbọ ala, ịkwesịrị ịkpachapụkwu anya n'ihi na ọ bụrụ na ị kụrụ aka diski ahụ mgbe ị na-etinye ihe dị arọ na ya, ọ nwere ike ime ka rotor gbagọọ obere mgbe ị na-etinye ya laghachi na igwe kwụ otu ebe gị, na-ehichapụ rotor na braki calliper na mgbanwe ọ bụla ma na-eme mkpọtụ cuh cuh cuh.
Ugh, ọ bụ ihe nzuzu idozi na oge ụfọdụ ọ pụtara na ịchọrọ rotor ọhụrụ. Debe ya mgbe niile na igwe rotor ma zere itinye ihe n'elu ya. Ndụmọdụ ọzọ ma ọ bụrụ na ị na-eji breeki diski arụ ọrụ bụ na ị kwesịrị itinye ihe na caliper mgbe ị na-ewepụ wiilị.
Nke a bụ n'ihi na mgbe ị na-adọba breeki lever enweghị rotor na caliper, nke a nwere ike ibute pistons a na-asọpụ ma na pad na-emechi megide ibe. Nwere ike ịmanye ya imeghe emeghe, mana ọ bụ ntakịrị nsogbu. Yabụ ị nwere ike itinye plastik pụrụ iche, plọg plastik ndị ahụ pụrụ iche ị nwere ike ịzụta.
Ma ọ bụ ọ bụrụ na ịnweghị nke ọ bụla n'ime ndị a, ị nwere ike iji kaadị azụmaahịa apịaji; ụfọdụ ịnyịnya ígwè ochie na-ejide wiil ndị ahụ na kposara. Ugbu a ị ga-achọ mpempe akwụkwọ iji wepu ihe ndị a, mana ọ dabara na ha anaghị adịkarị ụbọchị ndị a. Ọ bụ ntakịrị faffụ, mana ọ ka dị mma maka inwe ike iwepu wiilị ahụ.
Ọ bụrụ na inwere oghere pere mpe, ịnwere ike wepu wiil abụọ iji mee igwe kwụ otu ebe. Ma echegbula, nke ahụ abụghị nsogbu. Ọ ga-eju gị anya na oche na-agbadata ma na-ewepụ ụkwụ abụọ na igwe kwụ otu ebe, ụgbọ ala ole igwe nwere ike ịbanye.
Echere m, Renault Clios, Fiat 500, Porsche Caymans, ihe ọ bụla. Enwere ụgbọ ala ole na ole na-enweghị ike ịbanye igwe kwụ otu ebe mgbe ịchọrọ n'ezie. Ọ bụrụ n’ịchọrọ iwere ụkwụ abụọ ahụ, ụzọ kachasị mfe iji mee nke a bụ ịgbanye igwe kwụ otu ebe.
Ọtụtụ ndị ọcha na-ewere nke a dịka arụ ma kpọọ echiche ịme ya ga-agwa gị ka ị ghara ime ya. Ma ha ezighi ezi. You nwere ike tinye mpempe akwụkwọ ka ọ ghara imebi igwe kwụ otu ebe ma debe ya nke ọma ma dị ọcha. (egwu dị egwu) Iji wepu wiil azụ, ọ kachasị mfe ma ọ bụrụ na itinye wheel azụ n'ime obere gia na azụ.
Tọpụ ngwa ngwa ngwa ngwa ma ọ bụ ngwa ngwa na-agba ọsọ ọsọ, dọpụta azụ azụ azụ azụ wee gbagoo ma mee ka wiil ahụ daa. Bịarutere ebe ị gbakwunyere Plus, ọ dịkarịrị mfe ịtinye wiil abụọ n’ime igwe kwụ otu ebe ọbụlagodi na ọ bụ isi ala, yabụ mee otu ihe ahụ ọzọ, mana ọzọ. Ọ bụrụ na ị na-aga ezumike ma ọ bụ ikekwe ị na-ebu ngwongwo niile gị n'azụ ịnyịnya ígwè gị, mgbe ahụ, m ga-atụ aro itinye nke ahụ na mbụ wee kpuchie igwe kwụ otu ebe n'elu, ọkachasị ihe ndị dị arọ.
Fanye nke a na mbu. Ihe kpatara ya bụ na ọ dị mfe azọpịa igwe kwụ otu ebe gị na dịka anyị kwurula na mbụ, mpaghara ndị ahụ dị nro nwere ike imebi igwe eji agbaji diski na azụ mech hanger. Dị ka ọ dị na mbụ, iji ọtụtụ mpempe akwụkwọ, kapeeti, afụ afụ, ihe ọ bụla ịchọrọ ikpuchi uh ma kpuchido igwe kwụ otu ebe gị, ọ dịkwa mma ị kpuchie draịntin site na agbụ ahụ ma mmanụ na unyi ga-abanye na ụgbọ ala gị ọzọ. dịkwa mma iji tụọ okpokolo agba n’elu ibe ya.
Naanị iji ọtụtụ padding n'etiti na ha ekwesịghị imebi ha Ha dị mfe. Ma ọ bụrụ na ị nwere obi ụtọ ịnwe ụgbọ ala na-adabaghị adaba mgbe ụfọdụ ị nwere ike ime ka ọ dabara, mana ịnwere ike iwepu akụkụ ndị ọzọ dị ka post oche, pedals, na mgbe ụfọdụ ọbụlagodi ị na-atụgharị aka na gburugburu 'Enwere m olileanya na ị hụrụ nke a isiokwu bara uru. Ma ọ bụrụ otu a, biko nye ya mkpịsị aka ukwu ma soro ndị enyi gị kerịta.
Na ịhụ ihe ndị ọzọ ị na-eme, pịa ebe a. Mee ka anyị mata na ngalaba kwuru ma ọ bụrụ na ị nwere ndụmọdụ ma ọ bụ Ndụmọdụ ma ọ bụ mbanye anataghị ikike mgbe ị na-atụgharị igwe kwụ otu ebe na azụ ụgbọ ala.
Ngwunye igwe eji agba ọsọ ọ bụla dị mma?
Ya merena-mpịachi anyịnya igwekwesịrị ya? Ee, ha bụ igwe kwụ otu ebe maka ndị njem. Ọrụ ha na-eme ka ọ dịrị ha mfe ibufe na sistemụ njem ọha. Nwere ike iburu ha, yabụ na ị gaghị echegbu onwe gị maka izuru ya.
Nabata ụmụ okorobịa si Maine, okpomọkụ agaghị erute ogo 80 na ụbọchị ise na-esote ya mere igwe na-acha anụnụ anụnụ na n'ikpeazụ ihu igwe na-atọ m ụtọ, n'ụzọ, dịka m maara na ọ bụ karịa Arby nọ na Portland karịa ka m na-atụ aro na ma eleghị anya, anọ m oge ole na ole gara aga A ntakịrị ghọgbuo ruo ọtụtụ afọ, mana ha nwere iwu na-egbochi ịpịgharị ụgbọala nke RV n'otu ntabi anya na mpaghara Portland City, nke gụnyere ihe onwunwe nke onwe ebe ahụ ruo nwa oge ruo mgbe ha malitere ileghara ụgwọ narị dollar. na mmanye na-ebute RVs site na ngwongwo ndị mmadụ, ma ọ bụ ihe ọha na eze, ma ọ bụ ihe ọ bụla m achọghị ịbanye, ọ dịghị mkpa, Portland bụ naanị obere obodo na-enweghị isi na steeti Maine na m na-ezube ịnụ ụtọ oge ọkọchị ebe ọzọ ebe ọ bụ ntakịrị ihe na-akpọ òkù maka motohomes na-ekwu okwu banyere obi ụtọ na njem My mpịachi igwe kwụ otu ebe abịarute n ya mere nke a bụ ihe amazon zụọ, ọ bụ a foldable kọmpat bike, ụfọdụ nzukọ a chọrọ otú ahụ ka m na-aga na-emeghe a Ihọd elu ma hụ otu o si kọwaa ya na otu ọ ga - esi sie ike itinye ọnụ, ka anyị were ezumike ebe a n'ọgba aghara na nhazi, n'ihi na ọ bụrụ na ị hụla edemede m ikpeazụ, ị nwere ike chọpụta n'otu oge na ha zitere m igwe na-acha ọcha, ọ bụghị igwe na-acha anụnụ anụnụ m nyere iwu na nke ahụ na-abịa na agba anọ dị iche amaghị m ihe mere ha ji zitere m igwe kwụ otu ebe, ọ bụghị ihe dị egwu, o nwere obere acha anụnụ anụnụ na ya, mana ọ bụ ọcha igwe kwụ otu ebe na m nnọọ obere nwere mbipụta na Amazon, nke bụ nnukwu zuo na ulo oru mbo otú m ga-abụ ha na-akpọ ma hụ ihe ha chọrọ ime. Hey, enwere m nsogbu na iwu m nwetara site na Amazon. Ha zitere m igwe kwụ otu ebe na agba na-ezighi ezi, ee ọ bụ Eric, ha nwere agba anọ dị naanị otu n'ime ha bụ Amazon Prime, nke ahụ bụ ihe siri ike na-acha anụnụ anụnụ nwere ụfọdụ olu ọcha m nwetara igwe ọcha na-acha ọcha na-acha ọcha ojii yana otu mmadụ abụọ ma ọ bụ atọ acha anụnụ anụnụ bụ na ị nwere ike ị nwere ike ịgwa m ma ọ bụrụ na ị si na nke m ga-enweta na ị chere na achọghị m ins ins? Enwere m ekele maka ịkwụwa aka ọtọ gị mgbe ị gwara m na ha siri na-acha anụnụ anụnụ mgbe ha rere m otu acha anụnụ anụnụ, nke ahụ dị mkpa n'ihi na ọ bụghị oge m kwesịrị ichere izu ọzọ maka Anna, zitere m nke a na-acha ọcha ọzọ, yabụ m pụtara, yabụ nwee ekele maka ịkwụwa aka ọtọ gị, ị nwere ike nweta m ihe m ga-eme na ọcha ahụ wee nye m ego na ya kama m ga-akụ n'okporo ámá ọzọ ka m wee banye ekwentị na amazon ma nweta ya nke ọma ndị m na-ekwu na ọ siri ike ịga njem? n'ihi na ị maara na enweghị m izu ọzọ ma m na-achọ itinye nke ahụ nke ọma, ha gara n'ihu wee wepụ otu narị na dọla iri anọ site na ụgwọ ọnụahịa ịzụta nke a na-eweghachighị na akaụntụ m na kaadị onyinye ma na m kaadị, m debit kaadị n'ime ụbọchị ise, n'ihi ya, m na-ekwu, M nwere ihu ọma wee achịcha na igwe kwụ otu ebe ọkara arahụ na m na-echeghị ihe na agba ọ bụ na a price ọ bụ maa kwesịrị ya, n'ihi ya, ọ niile na-arụ ọrụ ma yabụ na enweghị m mmasị nrụgide Ọ bụ naanị ihe m nyere n'iwu ma ọ gaghị ewetara m ihe ọ bụla m ga-eche, ha enweghị onye na-acha anụnụ anụnụ na ngwaahịa ka ha wee mee otu ihe ma ọ bụrụ na m laghachite bulu ahụ ma degharịa ya. acha anụnụ anụnụ, ọ ga-ezitere m onye ọcha ọzọ, yabụ m ga-aga were narị dollar na iri anọ site na ọnụahịa ma kpọkọta igwe kwụ otu ebe a, ndị ọma, anyị nwere ụdị ọcha nke ogige mpịachi ogige ahụ, a chịkọtara ihe niile dị ka nke a sikwuo ike dị ka ọ ga-amasị m, a na-agbanwezi ihe niile ebe a ka m wee dozie njikwa ahụ n'ụzọ m chọrọ n'ọnọdụ niile na brek na gia levers ụzọ m chọrọ oche bụ naanị akụkụ m na-enweghị obi ụtọ banyere n'ihi na m chọrọ n'ezie ya a ma ị pụrụ ịhụ na kemeghi damper jamming ebe a bụ ihe nwute ma m nwere ike na-a sander na dị nnọọ ájá otu inch si ya ka m nwee ike inweta oche ebe m nwere ike chọọ n'ezie ka ọ dịrị mma.
Nkeji 7 ab arụ ọrụ
Ọ ka nwere ike ime, mana ụkwụ m fọrọ nke nta ka ha gbatịa na pedal n'oge ahụ, yabụ ee, nke a bụ igwe kwụ otu ebe m ga-apụ na obere obere tes m, na-ahapụ ụmụ aka ndị a naanị mgbe m anaghị agba ebe a, ọ bụ n'ezie a mara mma, na-atọ ụtọ na-agba ịnyịnya na m ga-enwe ike iji nweta ụfọdụ ọhụrụ ikuku na mmega ahụ na agagharị na a igwe kwụ otu ebe dị mma na m na-arụzi ụgbọala na 21 gia na m ga-esi elu nkpoda ugwu nta ma na-amasị m na ọ bụ nke ọma na kọmpat m nwere ntakịrị esemokwu Echere m na ọ bụ breeki breeki M breeki ebe a na - ete ya n'èzí ka ọ ghara ịdabere na ya ebe m na - enweghị ike ịkọ ma ọ bụrụ na ọ bụ naanị oge ịme obere nyocha ma ọ bụghị na m nwere ike itinye ihe nchacha na e nwere ihe na-na mpe mpe akwa anya, ọ na-emetụ a bit na arub na mgbe m na-agba ịnyịnya, ma ndị ọzọ karịa na yeah, ọ bụ a 26 nke anụ ọhịa ahụ mpịachi ugwu igwe kwụ otu ebe na ugbu a, m ga-agbalị na-egosi otú ọ folds elu. E nwere ngụkọta nke ihe anọ ị nwere ike ime iji mee ka ihe a pere mpe. Buru ụzọ wepụ oche ahụ, pịazie ụkwụ anyị na-ewepụ aka ahụ ma debe ha n'akụkụ, mgbe ahụ, m nwere mpempe aka ọzọ ebe a, nke a ga-agbatị igwe kwụ otu ebe na ọkara ka ị hụ otu ọ ga-esi gafere ma ọ nwere ike ịga n'ụzọ ahụ.
Aga m egosi gị etu esi dị sentimita iri na atọ n’obosara ebe a, ya na pedals ya apịaji na ogwe aka ya mma nke ogwe ahụ enweghị? ịga ebe ahụ ọ nwere ike ịba abụba ma ọ bụ ihe ọ bụla, ugbu a, anyị na-ele anya na 13 sentimita asatọ n'obosara, mara mma dị egwu, mara mma nke ọma ka ọ ghara ịchekwa ya n'èzí, ọ nwere ike ịga ogologo ebe m na-adọba ụgbọala, naanị ihu igwe, mara mma dị jụụ mgbe ị nwere igwe kwụ otu ebe n'ụzọ ụfọdụ? Ọ bụ ntakịrị ihe mgbu na-ere igwe kwụ otu ebe iji dozie brekị, mana m nwetara oku site na Greekley taa, ha nwere akụkụ niile nke OEM Chevy drum akpụkpọ ụkwụ na ntụgharị ntụgharị nke m ga-enweta na 7: 00 n'ụtụtụ echi: 30 kwesịrị ịpasa n'ụtụtụ na-eche maka ịlele n'ọnụ ụlọ ogologo ma na-atụ anya na anyị mechara mezie nsogbu a nsogbu breeki na Chevy chassis ma dịrị njikere maka ọhụụ ọhụrụ na Maine M hụrụ Maine n'anya, ọ bụ oge ịnọ ebe a na m enwere ekele n'ezie na Renee na Monique mere ka m nọrọ ebe a na akụ mgbe m na-eme ihe ole na ole, mana ee, igwe kwụ otu ebe ga-atọ ụtọ ịnyagharị na Jackson
Kedu nke kacha mma foldable igwe?
NaBest mpịachi BikesNwere ike ịzụta ugbu a
Kacha mmaInjin. Tern Vectorron S10. ịnyịnya ibu.com. $ 3,999.00.
Ọtụtụ vasatail. Ike Ike RadMini. radpowerbikes.com. $ 1,499.00.
Kpụrụ mmefu ego. Schwinn Loop. amazon.com. $ 321.62.
Kacha Portable (Nzọụkwụ Dị elu!)Igwe kwụ otu ebeFriday PakIt. inyinya.com $ 1,260.00.
Kacha mmaNjem. SinchAgboEbike. Nwachukwu.com.
Eprel 12 2021
Kedu ka ị mere? Know maara ihe, M nwere n'ezie ezi ngwaahịa n'ihi na ị na ugbu a, anyị na-agwa gị banyere top iri kasị mma mpịachi anyịnya igwe na isiokwu a. Site na echiche m ma ọ bụ ikpe m, emego m ihe ọhụụ ma edepụtara m ha dabere na eziokwu na ọrụ.
Ndi mmadu! Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịhụ edemede ndị ọzọ na-atọ ụtọ dịka nke a, echefula ịdenye aha na ọwa anyị ma echefukwala ịpị akara ngosi mgbịrịgba na ngwa YouTube ka ị ghara ichefu nwelite. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmatakwu ozi ngwaahịa biko lelee njikọ dị na nkọwa maka ozi ngwaahịa zuru ezu na ọnụahịa kacha mma. Foldable anyịnya igwe bụ vasatail na mgbe eleghara anya bike nhọrọ.
Ikekwe ụlọ obibi gị nwere obere ohere nchekwa, ma ọ bụ njem gị gụnyere ụgbọ oloko, ọtụtụ ụgbọ elu nke steepụ, na igwe mbuli jupụtara. Igwe a na-agbaji agbaji bụ nsogbu igwe kwụ otu ebe na ngwungwu ọchị na-atọ ụtọ na obere ngwugwu. Site na ndị otu na ndị na-agagharị agagharị na elekere eletriki eletrik, enwere ike ịnwe igwe enwere ike ịbelata ebe ahụ iji gboo mkpa ịgba ịnyịnya gị.
N'ihi ya, m na-etinye ọnụ na-enyocha ụfọdụ nke kasị mma mpịachi anyịnya igwe na-enye. Lelee ederede a rue na njedebe maka ozi ngwaahịa na-atọ ụtọ. Ka anyi bido.
Ebe mbu bu igwe igwe mpi EuroMini ZiZZO Campo. EuroMini Zizzo Campo mpịachi igwe kwụ otu ebe bụ ezigbo fechaa, echekwa mpịachi igwe kwụ otu ebe na ihe aluminom etiti nwere ike iji mee ihe maka njem ikpeazụ nke njem gị ma ọ bụ naanị maka njem mmụta njem. Ọ dịzịrị gị.
Campo na-abịa na ngwa ngwa mpịakọta alloy alloy. Enwere ike ịtụgharị ogwe aka iji mee ka ọnọdụ gị dị mma mgbe ị na-anya ụgbọala. Campo nwere ike apịaji ruo akụkụ ndị a: (Ogologo 27 sentimita asatọ, ogologo 31 sentimita asatọ, obosara 12.5 sentimita asatọ).
Oldmegharị ya ọ dị mfe ma nwee ahụmịhe, ịnwere ike ịpịgharị igwe kwụ otu ebe n'ime 30 sekọnd ma ọ bụ obere. Mgbe apịaji, oche oche na-agbada ma jiri ya mee njem na ụkwụ abụọ iji mee ka ọ kwụsie ike na ọnọdụ ziri ezi. Lee ụfọdụ nkọwa: All Light Weight Aluminom Alloy - Frame, V-Style Brakes.
Shimano nke mbụ Na-agba ọsọ ọsọ ọsọ ọsọ 7, Shimano Revo 7-speed Grip Style Shifter na igwe anaghị agba nchara nwere Speed ​​Cassette Gears. Mfe foldable azuokokoosisi mere nke aluminum alloy, foldable Pedals maka mfe nchekwa. 20 anụ ọhịa aluminom rim, na nwa anodized 28 onu spokes.
Mkpụrụ osisi magnetik siri ike na-ejide igwe kwụ otu ebe mgbe atụgharịrị. Arọ: 28 lbs (fechaa mpịachi igwe kwụ otu ebe): Max. Ibu Ibu 240 lbs.
Na nke abụọ bụ Dahon Mariner D8 mpịachi igwe kwụ otu ebe. The Dahon Mariner D8 mpịachi igwe kwụ otu ebe abụrụla ụwa kacha ewu ewu mpịachi igwe kwụ otu ebe maka ezi ihe kpatara ya ma na-adị ngwa ka ọ bụrụ onye gị na ya na - eme njem. adabara - site na bọs ruo ụgbọ oloko na ụgbọ mmiri na ndị ọzọ.
Ezubere ka ọ wagharịa ebe niile. Ahapụla ịnyịnya ígwè gị n’akụkụ ebe mmadụ niile ga-ewere ya. Mariner a na-atụgharị igwe kwụ otu ebe na-erughị sekọnd 15, n'ihi ya ị nwere ike iburu ya ma were ya.
Eku nke Mariner D8 mpịachi igwe kwụ otu ebe nwere Dalloy Sonus Tubeset na LatticeForged Hinge na Vise Grip Technology. Ndụdụ ahụ nwere Hi-Ten Steel pupụtara na steerer tube maka ịmị ire ma kwụsie ike. A na-eme ihe njikwa ahụ site na telescope alloy radius na Fusion Technology maka nkasi obi na njikwa.
Site na Dahon 8-speed Shimano RD-M310 azụ derailleur, Mariner na-atụgharị igwe kwụ otu ebe bụ ihe dị iche iche ma dịkwa mma maka ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ala ọ bụla. Taya jikọtara ya na aluminium -Wall rim iji nye ntọala siri ike na arụmọrụ kacha elu 3 bụ Schwinn Loop mpịachi igwe kwụ otu ebe. Schwinn Loop 7-Speed ​​bụ ihe ama ama na-akpụ akpụ igwe kwụ otu ebe dị ka Schwinn bụ akara ama ama America mara maka ịgbatị akụrụngwa mgbatị ahụ.
Schwinn Loop 7-Speed ​​bụ na ụdị mpịachi igwe kwụ otu ebe dị obere ma dịkwa mfe iji, Schwinn Loop 7-Speed ​​mpịachi igwe kwụ otu ebe pere mpe. N'ezie, a na-akpọ Schwinn Loop 7-Speed ​​dị ka igwe kwụ otu ebe. Nke a pụtara na ọ bụrụ na ị kpebie ịzụta igwe kwụ otu ebe Schwinn Loop 7, mgbe ahụ ị ga-ezu ike zuru oke n’ịmara na ụdị igwe kwụ otu ebe a agaghị eweghara ọtụtụ ohere n’ọfịs gị, ime ụlọ ma ọ bụ ụlọ gị.
Ọ bụ ezigbo mfe njem na Schwinn Loop 7-Speed ​​mpịachi igwe kwụ otu ebe. The Schwinn Loop 7-Speed ​​bụ a mpịachi igwe kwụ otu ebe na-amasị ndị na-agba ịnyịnya ígwè na ya oké atụmatụ. Ihe kachasị mkpa nke igwe kwụ otu ebe gụnyere: 7 gears, aluminum linear brakes, aluminum super low-profile folding frame, mudguards zuru ezu, akpa akwa akpa na ọtụtụ ndị ọzọ.
Nọmba nke anọ bụ Schwinn Hinge Folding Bike. The Schwinn Hinge mpịachi igwe kwụ otu ebe kwesịrị ekwesị maka a dịgasị iche iche nke na-agba ịnyịnya na a tụrụ aro kacha onye na-agba arọ nke 220 pound. Na nke a bara uru otu-ọsọ mpịachi igwe kwụ otu ebe ị nwere ike na-isi ọwụwa-eme ka okporo ụzọ na igwe kwụ otu ebe na-arụ ọrụ na a siri ike ígwè etiti, 20-anụ ọhịa alloy wiil na a bara uru ịkpakọba usoro, na Schwinn mgbabere uzo dị mfe iga, mfe mpịachi na mfe stow away.
Gụnyere a mpịachi pedal na mgbe pedal maka mfe nchekwa na folds 30 'x 32' x 11 'na nke The Schwinn Hinge mpịachi igwe kwụ otu ebe bụ ngwa ngwa na mfe na 1-ọsọ mbanye na-enye gị ohere tụgharịa, mgbe ị chọrọ ezumike. The Schwinn mgbabere uzo mpịachi igwe kwụ otu ebe na-abịa na n'ụzọ zuru ezu encased mudguards na-eme ka ị dị ọcha ma akọrọ mgbe ịnya, na ọnọ n'azụ ogbe zuru okè maka ọrụ gị akpa. Igwe kwụ otu ebe a na-abịa ịdị na-ezukọta, gụnyere nnukwu akpa naịlọn nchekwa, ọ dịkwa mma maka ndị njem na ndị na-agba obodo.
Abịa na akwụkwọ ikike ole na ole nke Schwinn. Na 5 ebe bụ Dahon Speed ​​D7 mpịachi igwe kwụ otu ebe.Dahon Bikes D7 7-speed obere mpịachi igwe kwụ otu ebe, ị nwere ịrịba mgbanwe mgbe ị na-apụ na ihe banyere obodo.
Igwe a na-ebugharị nke igwe kwụ otu ebe nwere aluminom nwere ike ịpịkọta ngwa ngwa ka ị wee nwee ike ị kwụ igwe kwụ otu ebe n'ime ime ụlọ gị ma ọ bụ were ya mgbe ị na-aga bọs ma ọ bụ ụgbọ oloko. Naanị na-atụle naanị 27.6 pound, nke a na-agba ọsọ mpịachi na-enye gị ohere ịgbakwunye ịnyịnya ígwè gị ebe ọ bụla ka ị ghara ịhapụ ya ekpochi n'èzí.
Na taya nke anụ ọhịa 20 nke nwere mudguards na oche a na-agbanwe agbanwe maka ndị na-agba ịnyịnya bụ ndị na-erughị 1.70 m ruo ihe karịrị 1.80 m, siri ike V-break na akpa akwa.
Igwe kwụ n’obodo a juputara na njirimara bara uru. Hụ ịhụnanya na nnwere onwe ma were igwe kwụ otu ebe gị ebe ọ bụla ndụ ga - eburu gị site na mfe ịdị mfe nke Dahon Bikes Speed ​​D7 7-speed folding bike. 7 gbapụrụ ọsọ na-enye gị nnukwu mgbanwe mgbanwe na arụmọrụ na-agagharị 27.6 paụnd aluminom na-agbada igwe kwụ otu ebe na sekọnd ka ị nwee ike iburu ya mgbe niile kama ịhapụ ya n'èzí.
Ndị njem na-eji ụgbọ ala ma ọ bụ ụgbọ oloko, igwe kwụ otu ebe a ga-ewetara gị n'ụlọ gị ma ọ bụ ụlọ gị ka ọ dị mfe Ma laghachikwa ọzọ.A na-emezi mgbanwe nwere oche oche dị mma na-emegharị ka ndị na-agba ọsọ si n'okpuru 1.50 m karịa 1.80 m n'ịdị elu.
Nọmba 6 bụ Schwinn Adapt mpịachi igwe kwụ otu ebe. The Schwinn Adapt 3 mpịachi igwe kwụ ọtọ na-adabara a ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ndị na-agba ígwè. Na nke a bara uru 9-ọsọ mpịachi igwe kwụ otu ebe na ọnọ n'azụ ogbe, i nwere ike gbanwee isi ọwụwa-eme ka okporo ụzọ na igwe kwụ otu ebe na-arụ ọrụ.
Na a ìhè aluminum etiti, 20-anụ ọhịa alloy wiil na a bara uru ịkpakọba usoro, na Schwinn Adapt 3 dị mfe iga, mfe n'ogige atụrụ na stow pụọ. Site na igwe kwụ anọ nke igwe kwụ otu ebe, Shimano twist grips, ịgba ígwè, ịgba ígwè na-aghọ egwuregwu ụmụaka. na ShimanoTourney azụ derailleur.
The Schwinn Adapt mpịachi igwe kwụ otu ebe na-abịa na n'ụzọ zuru ezu encased mudguards na reflective n'akụkụ ogwe maka ukwuu visibiliti. Igwe kwụ otu ebe a na-abịa ịdị njikere ịrị elu, gụnyere akpa nchekwa naịlọn zuru oke ma zuru oke maka ndị njem na ndị na-agba obodo. Abịa na Schwinn ndụ akwụkwọ ikike Number 7 bụ Dahon Launch D8 mpịachi igwe kwụ otu ebe.
Mmetụta mbụ m nwere na Launch D8 dị ezigbo mma maka na ọ naghị ele anya dị ka m chere. Ọ ka bụ folda dị arọ karịa 27 lbs, n'agbanyeghị na ọ nweghị ngwa ọ bụla dịka akwa ma ọ bụ akpa akwa. N'agbanyeghị nke ahụ, ịdị arọ na nha ka nwere njikwa, ya mere enwere m ike iji otu aka na-ebu ya.
Nke a dahon nwere mgbatị ọhụrụ a na-akpọ Jaws miting. Nke a bụ ihe na-esote evolushọn nke Dahon's Lo ckJaw mgbabere uzo na-agba na ụfọdụ gara aga anyịnya igwe. Ọhụrụ jaws mgbabere uzo na-eme ka eku na eze mkpọchi n'ezie mụ na-emekwa ka imewe ihe mara mma ka e nweghị jọrọ njọ clamps na latches na etiti.
Bido D8 ka ọ na-agba ịnyịnya dị ka igwe kwụ otu ebe na-abụghị igwe kwụ otu ebe. Eku ahụ siri ike ma sie ike ma echere m na ọ nwere ike ịdị ogologo oge. Usoro mpịachi nwere naanị ọghọm ole na ole, mana ọ bụrụ na ị nwere ike ibi na ya, ị gaghị enwe obi mgbawa na igwe kwụ otu ebe a bụ nhọrọ magburu onwe ya maka ịgba n'okporo ụzọ dị larịị na nke ọrụ n'aka.
Na nọmba 8, X Spec bụ 26 nke anụ ọhịa 21 na-agba ọsọ igwe kwụ otu ebe maka ndị okenye. Ugbu a ị nwere ike were igwe kwụ otu ebe gị ebe ọ bụla ị na-aga n’enweghị nsogbu nke igwe kwụ otu ebe ma ọ bụ tinye ihe egwu nke ịkpọchi n’ebe ọha na eze na X-Spec 26 ’FoldingBikes ọhụrụ. X-Spec igwe kwụ otu ebe na-agbakọta nke ọma n'ihe dịka 15 sekọnd, yabụ ị nwere ike ịtọ ya ebe ọ bụla.
Ọ bụghị naanị na ụdị ekike a dị mma maka ụzọ ugwu, ọ dịkwa mma maka ụmụ akwụkwọ kọleji, ndị ọrụ ụlọ ọrụ, gburugburu obodo, ma ọ bụ njem na-adaba adaba. Ogwe igwe elekere 26 nke anụ ọhịa ahụ na-enye gị nnukwu njem site na mgbakwunye dabara adaba nke agagharị. A na-eji ígwè siri ike rụọ igbe a na-ebugharị ebugharị ma na-abịa na ntụkwasị obi, nke kachasị ọkwa Shimano dị ka ndị na-agbanwe agbanwe na ndị na-azụ azụ.
Ọrụ 21-ọsọ na-enye gị nhọrọ nke ịkọgharị ma ọ bụ ịpịa ihe na mgbatị dị elu. Teknụzụ breeki diski ahụ na-eme ka ndụ dị ogologo ma nwee ike ịme braking karịa ike V-brek. Na 9th ebe bụ SwagCycle EB-5 Pro fechaa na Aluminium ịkpakọba Ebike.This electric bike abịa tupu kpọkọtara otú ị na-adịghị na-ala n'iyi oge ma ọ bụ ego na mgbagwoju anya nzukọ.
Ogologo-mgbanwe maka ndị okenye na ndị nọ n'afọ iri na ụma Na-agbanwe oche igwe kwụ otu ebe na ogologo aka na-adị mfe ịchọta ọnọdụ zuru oke maka njem dị mma. Ogwe osisi 14-inch jupụtara na taya roba jupụtara na eriri breeki ọsọ ọsọ na-eme ka ịgba ọsọ na-agba ọsọ ma na-arụ ọrụ dị mfe 25 kilomita dị nso Drive gị na-atụgharị igwe kwụ otu ebe na njem zuru ezu iji ruo 15 kilomita n'otu njem ma ọ bụ dabere dabere na ntụgharị n'etiti ike aka na paliki. Fgba ọsọ ọsọ na-echekwa mpịakọta igwe kwụ otu ebe nwere ike ijide ndị na-agba ịnyịnya ruo 264 pound na okpukpu atọ, na-eme ka ọ bụrụ kọmpat ụgbọala, dabara na tebụl, na ụzọ ụgbọ oloko, na ndị ọzọ obere oghere.
Igwe eletriki 250 watt nwere ike ịgba ọsọ nke 25 mph maka ihe ruru 24 kilomita na ike zuru ezu ike EB-5 foldable electric bike. Na mkpokọta na pedal, ọ bụ azịza mara mma ma mara mma maka ịkwagharị obodo oge a. N'ihi e-igwe kwụ otu ebe a, etiti ahụ na-agba ọsọ ngwa ngwa, nchekwa na njem dị mfe.
Nọmba 10 bụ Mgbasa Ohi Na-eguzogide 8-Speed ​​Disc-Brake City Commuter Bike. Ebe ewusiri ike bụ naanị igwe kwụ otu obodo nke ụmụ nwanyị na ụmụ nwoke tụkwasịrị obi na-egbo mkpa kwa ụbọchị. A ga-atụkwasị obodo anyịnya igwe maka ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị.
Ọ bụ ya mere anyị ji eji igwe mgbochi na-ezuru igwe kwụ otu ebe site na wiil ya ruo n'oche ruo n'oche aka. Maka nhụcha akụkụ dị na igwe kwụgbọ a, hapụ ka akwụkwọ mmado na-acha ọcha. Ọmarịcha igwe kwụ otu ebe kachasị mma ga-agakwa n'okporo ụzọ niile, ọ bụ ya mere anyị ji akwadebe igwe kwụ otu ebe nwere ike na-eme ka olulu na iko gbajiri agbaji dị mfe.
Smoothgbọ njem dị larịị, nke siri ike e mere iji lanarị obodo ahụ. Omenala nchekwa bolts na-eme nke a Anti-ezu ohi igwe kwụ otu ebe na mmiri na-egbochi ndị ohi. Taya agu na-egbochi igwe kwụ otu ebe a.
Nchara na-eguzogide nchara nchara aluminom + nke na-eme ka igwe kwụ otu ebe mara mma. 8-ọsọ bike pụrụ iche maka ndị na-eme kwa ụbọchị. Ndị a bụ ndị kacha mma mpịachi anyịnya igwe iji. na ị nwere ike ịzụta ugbu a.
Anyị na-akwado gị ka ịzụta EuroMini ZiZZO Campo mpịachi igwe kwụ otu ebe na nọmba 1. Nke a bụ ahịa kachasị mma na ahịa. Debanye na ọwa anyị ma echefula ịlele njikọ na nkọwa maka ozi ndị ọzọ.
Nwere ike ibugharị igwe kwụ otu ebe?
Ha dịkwa mfe ibugharị na n’ọdụ ụgbọ elu.Ị nwere ikenọkwasi ya, were tagzi, ma ọ bụburuya n'elu ụgbọ oloko ma ọ bụ ụgbọ ala. Ndị ọzọmpịachi igwe kwụ otu ebena ọkara. Bromptonsn'ogige atụrụn'ụzọ atọ.June 12. Dec 2019
Don't naghị ahụ ma ọ bụ nụ maka igwegharị igwe kwụ otu ebe na mgbe ụfọdụ enwere ụfọdụ obodo na ọwa Youtube a raara nye ha, ọkachasị akara Brompton dị elu, mana anyị na-ahụ ha oge ụfọdụ na ndụ n'ezie ma anyị anaghị anụkarị ha na-aza nsogbu na ha na-enyere aka, dị ka izu ohi igwe kwụ otu ebe anyị tụtụrụ igwe kwụ otu ebe ọnwa ole na ole gara aga, ọ masịrị ha na ha nwere ọtụtụ uru bara uru karịsịa maka ndị bi n'obodo na ọghọm adịghị njọ dịka ị chere na anyị achọghị anyị ịnyịnya ígwè zuru ezu na-ekpochapụ ya, mana ọtụtụ ndị nwere ike ịfefe naanị otu igwe kwụ otu ebe n'isiokwu a, anyị ga-atụle ihe ndị na-adịghị mma na ihe ịtụnanya nke igwe kwụ otu ebe yana ndụmọdụ anyị maka ndị igwe kwụ otu ebe sitere na zizzo an ọnụ ala ika si amazon mere uche anyị ikpe n'ihi na a Secondary anyị bụ anyịnya igwe na ndị ọzọ dị oké ọnụ mpịachi igwe kwụ otu ebe nwere ike inwe uru ndị ọzọ otú Mkpa ọkụ ibu na ndị ọzọ ọkaibe udi weta fol Ihe omuma atu bu Brompton, ma enwere otutu uzo nke uzo ozo karie ka ichoro, ufodu nwere ihe ndi puru iche. Ihe mbu nke oma nke ugbo uzo bu uzo nke anyi apịaji dị obere karịa igwe kwụ otu ebe anyị na - arụkarị, nke a abụghị obere obere igwe kwụ otu ebe ị ga - enweta.
Isi ihe mere anyị ji zụta ọgba tum tum ndị a bụ iji buru onye na-enye ọzụzụ n'ụgbọ ala mgbe anyị gara ileta obodo ndị ọzọ, agbanyeghị na anyị hụrụ obere obere bara ezigbo uru n'ụlọ ihu igwe mana anyị bi n'ụlọ ije na montreal ma buru igwe anyị na-agakarị. a hassle, anyị ọbụna na mberede mebiri a oriọna, ma ọ bụrụ na ọ dịghị gị mebiri oriọna ugbu a anyị na-ahọrọ, anyị na-eji mgbe dị nnọọ anyị mpịachi anyịnya igwe maka mkpumkpu njem zere ibu anyị zuru-size anyịnya igwe na ala steepụ a ole na ole flights, ọbụna ma ọ bụrụ na mpịachi usoro na-agbakwunye ụma 30 sekọnd, nke anyị ga-ekwu maka ya n'ikpeazụ n'isiokwu ahụ. N'èzí ụlọ, igwegharị igwe kwụ otu ebe dị mfe karịa maka njem ọtụtụ multimodal iji rụọ ọrụ ma ọ bụ n'ụlọ ahịa kọfị ma ọ bụ ụlọ ahịa nri, karịa ịkpọchi ha, uru ụgbọ njem na nchekwa niile a dị mfe ịhụ, mana uru ọzọ na-apụtaghị ìhè bụ mfe nke ojiji Anyị banyere n'ime oyi ịgba ígwè n'ihi na oge mbụ n'afọ a ma mee unconventional oke nke iji anyị mpịachi anyịnya igwe dị ka ha dabara na bathtub nnọọ mfe. Iji wepu nnu na unyi oge nile, okwesiri ka a sachaa ebe a na-asa ahụ karịa ka ha chọrọ, mana ha agaghị emeri.
Otú ọ dị, buru n'uche na igwe kwụ otu ebe ndị a enweghị otu uru na ibu ka ha nwere ike ịha nha n'ihi usoro mpịachi chọrọ ihe ndị ọzọ na nkwado. Mgba igwe kwụ otu ebe a na-ebu ibu na-erughị naanị kilogram 30, nke bụ naanị isii ma ọ bụ asaa pound Mkpa ọkụ ka m zuru-size ngwakọ bike na a arọ karịa a ahụkarị ọduọ igwe kwụ otu ebe, ọ bụ ezie na obere ihe ndị na-erughị cumbersome na-ebu ọbụna otu ibu, ọ na-adịghị n'ezie na-arụ ọrụ otú ahụ, ọ dịkarịa ala dị ka dị ka anyị nwere ike iji kilomita 500 nke anyị ji igwe kwụ otu ebe ndị a kpuchie ugbu a achọtala, ezigbo mmachi dị na mgbatị ahụ, nke anaghị ekpuchi oke dị na igwe kwụ otu ebe n'ihi na igwe mpịachi na-enwekarị azụ azụ ma ọ bụghị n'ihu, kpọmkwem nhazi na-adabere na bike nlereanya, ma anyị ekpuchi ala Kwadobe maka ugwu gbadara mma karịa elu Kwadobe maka ọsọ dị nnọọ ka fun ezie na anyị kpebiri iji nwalee arụmọrụ nke anyị mpịachi igwe kwụ otu ebe na 4.3 kilomita Giulivil le Formula 1 circuit nke Montreal na 8 inch ịgba ọsọ igwe kwụ otu ebe si 10 etoju nke mgbalị, ma m chere nnọọ nanị site nnyefe.
Ọsọ ụkwụ m kachasị na egwu ahụ bụ ihe dị ka kilomita 26 kwa elekere na ọsọ ọsọ nke 39 kilomita kwa elekere dịka Stravadas adịghị njọ, mana ọ nọ n'ọnọdụ ọnọdụ dị mma na arụmọrụ n'ezie ọ na-ejedebe n'ụzọ na-enweghị ntụpọ na nchekwa na mpịachi anyịnya igwe na-eche mfe na elu gbapụrụ ọsọ Naa mụ karịa nkịtị anyịnya igwe Ọ bụghị banyere Mee àgwà, dị ka etiti na-ele pụrụ ịdabere na, ma ndị obere wiil, obere etiti size na a obere jerky sterịn pụtara na olulu na elu na-agba na-ukwuu iyi na ndị ọzọ na - enwe nchekasị - anyị anaghị ebugharị n'ụdị dị elu dị otú a mana ọ bụ ezigbo nsogbu mgbe ọ na - agbada ugwu maka ule arụmọrụ ọzọ anyị nwere kamiya ood ịrị na mont royalfrom site na ihe ịrịba ama na ebe a na - ele anya na - enwekarị ihe karịrị isii pasent na a ogologo nke 1 kilomita bụ ezigbo nkpoda na-eji ọtụtụ ụzọ agba ígwè na Montreal maka ọzụzụ n'ihi ya, ọ bụghị ebe ị ga-atụ anya ka a mpịachi igwe kwụ otu ebe ga-abụ, ọ bụghị kpọmkwem mfe, ma ọ bụghị na dị iche na nke m nkịtị ma Full-size igwe kwụ otu ebe na otu ọrịrị, nnukwu onye nsogbu na mpịachi igwe kwụ otu ebe abụghị n'ezie na m chọrọ ịlaghachi azụ n'ugwu ahụ ma nwee ihe egwu ka obere wiil na-akụtu ụfụ ma ọ bụ olulu na nnukwu ọsọ. Ihe nkasi obi ọzọ igosi na obere ogwe aka pụtara na njikwa aka dị nso na nwata anaghị abụ ihe na-adịghị mma, mana ọ na-eme ka ị banye n'ọnọdụ ziri ezi nke ga-adaba adaba maka ọsọ ọsọ ọsọ kama nke ahụ agbatịpụrụ agbatị nke bụ ihe aerodynamic na conducive to ngwa ngwa gbapụrụ ọsọ size dabara onye ọ bụla na nke ahụ pụtara na ha ezughị okè n'ihi na ị dị ka nri size fitbike, na handlebars na sadulu ịbụ nnọọ a dịgasị iche iche na ikekwe ha dabara mma karịa ị na-eche. Anyị abụọ fọrọ nke nta ka ụkwụ dị iche na anyịnya igwe ndị a nwere ike ahaziri iji dabara anyị abụọ ihe ijuanya nke ọma, dị nnọọ mma karịa ụfọdụ nke adịgboroja zed nkịtị anyịnya igwe anyị na-agba ịnyịnya n'oge gara aga, na-abụkarịkwa o kwere omume, mpịachi anyịnya igwe ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa Anyị ekwu banyere arụmọrụ na nkasi obi na oke ọsọ, mana enwekwara ajụjụ banyere ogologo oge n'onwe anyị mgbe anyị mere ogologo njem wee jiri igwe anyị na-ejikarị eme ihe ma ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume n'ihi na ha nwere ntụsara ahụ ma kwụsie ike na nke ahụ na-agbakwụnye ogologo ụbọchị ịgba ígwè .
nnukwu na anyịnya igwe
Enweghi echiche na mpịachi mpịachi na-ejedebe na njem dị mkpirikpi na agbata obi, ọ bụ ezie na anyị agbagola ha ruo kilomita 40 n'enweghị nsogbu ọ bụla ugbu a ma anyị na-atụle ịme njem ogologo oge ma ọ bụrụ na anyị enweghị igwe kwụ otu ebe anyị, Ogologo ndụ na-adị siri ike ma mee nke ọma na ihe dị elu ga-abụ ihe siri ike karị, mana ihe ọ bụla nke na-enye ohere igwe kwụ otu ebe aka n'ụdị kọmpụta ya na-agbakwụnye mgbagwoju anya na ihe egwu nke ọdịda na nke ahụ Bụrụ mwepụ site na mpịachi igwe kwụ otu ebe, enwere ike ịtụ anya na ụfọdụ n'ime akụkụ ndị a agaghị abụ nke a ga-ere na ụlọ ahịa igwe kwụ otu ebe. Akụkụ ọzọ bụ ụgwọ, nke na-adị oke ọnụ karịa igwe kwụ otu oke zuru oke n'ihi mgbakwunye agbakwunyere agbakwunyere ma eleghị anya n'ihi na ha bụ ngwaahịa niche.
Anyị kwenyere na anyị nwere ezi uche na azụmahịa anyị mpịachi anyịnya igwe, nke na-eri ihe 500 Canadian dollar ọ bụla, a brompton nwere ike na-eri ihe ọ bụla si 1500 ka 3000, o doro anya na a otutu mgbe anyịnya igwe na-eri na-emekwa oke, ma mpịachi igwe kwụ otu ebe dị elu na nkezi ma ọ bụrụ na ị na-eche otú mpịachi usoro na-arụ ọrụ dịgasị dabere na igwe kwụ otu ebe, ma na awa ọ na-ewe banyere 30 sekọnd na-agụnye ise nzọụkwụ na ẹsụhọde aka nke atọ mpịachi ala oche nke anọ mpịachi petals ise akpọchi na mpịachi etiti a usoro bụ pụtara ahụkarị maka a mmefu ego - Iji chịkọta ihe niile dabere na ahụmịhe anyị Fgba igwe kwụ otu ebe nwere nnukwu uru karịa igwe kwụ otu ebe na oke ma anyị achọpụtala n'onwe anyị na iweta ọtụtụ uru bara uru maka nchekwa, njem na nhicha nwere ndapụta ọ bụla n'ihe metụtara arụmọrụ, ewezuga n sitere na ntụgharị asụsụ, mana na omume nkasi obi na nkwụsi ike na-amachi oke ọsọ, n'otu akụkụ ha na-amachikwa distanc e, ma anyị chọpụtara na igwe kwụ otu ebe ndị a na-ejikwa anya dị mma karịa speedcost bụ ọghọm nke igwe kwụ otu ebe, ma ogologo oge na ogologo oge Nweghachi nwere ike ịdị oke mma, ọ bụ ezie na anyị nwere ha ọnwa ole na ole, usoro mpịachi igwe kwụ otu ebe bụ ihe nlereanya dabere, ma anyị anaghị ahụ ya oke iwe, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ị hapụrụ ya ka ọ meghee mgbe ụfọdụ, ọ ka ga-adị nkenke karịa igwe kwụ otu ebe zuru oke Ka emechara, ajụjụ ga-adị bụ ma ịzụta ụdị igwe kwụ otu ebe a ma ọ bụ na ọ dịkarịa ala tụlee anwansi nke mpịachi mpịachi na-eme n'ezie mgbe ha meghere ịnyịnya ígwè na ọnọdụ ụfọdụ ebe ọ na-enweghị gị tupu mgbe ị na-emeghị igwe kwụ otu ebe iji rụọ ọrụ bụ enweghị ebe dị mma iji tinye igwe kwụ otu ebe na Stow n'èzí mpịachi igwe kwụ otu ebe bụ ezigbo ezigbo nhọrọ Ọ bụrụ na ọ meghee ohere ịdebe igwe kwụ otu ebe gị n’ebe ọrụ gị, ọ baghị uru etu igwe mpịachi jiri tụnyere igwe kwụ otu ebe, ebe igwe anaghị enwe nhọrọ. Maka njem, dịka ọmụmaatụ, mgbe anyị bịara na nso nso a na Toronto enweghị ụzọ isi weta igwe kwụ otu ebe anyị zuru oke, yabụ ụgbọ ala mgbazinye agba anyị nwetara na igwe anyị na-agba ọsọ na-enye anyị ohere ịnya igwe ụbọchị niile, nke bụ n'ụzọ kacha mma iji chọpụta obodo.
Bikgba ígwè mgbazinye nwere ike ịbụ nhọrọ, mana ha dị oke ọnụ ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịnwe ha ruo ọtụtụ ụbọchị. Ndi ozo ma obu ndi njem ma obu ibi n’obere uzo na igwe ndi ozo adighi adi nma ma oburu na odigh nke a bu nsogbu nye gi n’ihi na odighi oghere n’ulo oru gi ma obu ebe ozo iweta igwe gi, ekele diri gi na-ekiri isiokwu rue ugbu a ma i nweghi ihe mere ị ga - eji chee echiche banyere igwe mpịachi, ọ ga - enwe ihe ndọghachi azụ n’enweghị ezi uru, belụsọ na ichoro egwuru egwu ohuru, n’okwu a Ajuju a ka sie ike mgbe ino n’etiti na nwere ike nweta igwe zuru oke iji rụọ ọrụ mana ị jighi n'aka ma ọ bara uru? Ikekwe ị chọrọ iji igwe kwụ otu ebe soro gị n'ụgbọala ma ị nwere ike? Nweta akwa akpa akwa maka ụgbọ ala ahụ, mana ị gaghị achọ ma ọ bụ na ị nwere ike dabara igwe kwụ otu ebe na ụlọ gị, mana ọ gaghị adaba, yabụ ọ dị mkpa ịnwale igwe mpịachi ogologo oge tupu ịzụrụ n'ihi na ọ nwere obere ọghọm na nkasi obi ma na-eche tụnyere a nkịtị igwe kwụkpu Ihe nkịtị nke a nkịtị igwe kwụ otu ebe bụ n'ezie nhọrọ na nke a, anyị ga-dị nnọọ kwughachi na mpịachi anyịnya igwe aka anya mma karịa ọsọ, na ahụmahụ anyị ọ bụ na maka ahụmịhe anyị na mpịachi. anyịnya igwe anyị eritela ọtụtụ uru n'aka ha ma anyị chere na ha nwere ike ịbara ọtụtụ ndị ọzọ uru, ọkachasị n'ihi na mgbe anyị jiri igwe kwụ otu ebe na agbata obi anyị, anyị na-ajụ ndị chọrọ ịmata ihe otu ha si aga ma ọ bụrụ na anyị masịrị ya ma ọ bụrụ na ị Anyị ejirila mpịachi igwe na-emegharị mgbe ahụ anyị ga-achọ ịnụ na nkwupụta ma ahụmịhe gị ọ dị mma dị ka nke anyị ma ọ bụ na ọ bụghị ekele maka s Watch na, dị ka mgbe niile, echefula ịmasị na ịdenye aha
Ngwakọta igwe eji agba agba agba agba adịghị mma?
Tụlee nke ahụmpịachi anyịnya igwen'agbanyeghị ihe ahịa na-ekwu, ha dị arọ iburu, nwere ike bụrụ ọgba aghara n'ime ụlọ, ị nwere ike ịmịnye uwe gị n'ụzọ dị nro ma ha anaghị adịte aka. Ha chọrọ mmezi na nhazi oge niile. Ha dị oke ọnụ ma na-adịkarị oke ọnụ karịa nke oge niile.
Gịnị mere mpịachi igwe kwụ otu ebe adịghị mma?
Ọ bụ ezie na ha na-agbakwụnye mmetụ dị na ntaneti ahụ ma nwee ike ịbụ ihe na-adịghị mma ma a bịa n'ịdị na-agba ịnyịnya, ị nwere ike ịkwụsị izu asịrị ọ bụla nke njikwa ejighị n'aka, obere mgbatị na mgbalị ọzọ-mpịachi anyịnya igwena-enwe obere wiil dị mfe ịnyagharị ma na-adị mfe karị ibu.08.21.2019
Enwere ike mpịachi igwe kwụ otu ebe?
Kpakọba anyịnya igwegosiputa ihe di iche iche nke inch inches nke dikwa ka nke nke ọkọlọtọigwe, ya merenwere ikemaa gbaa ịnyịnyaugwu. N'ihe banyere ugwu ma ọ bụ ugwu, ị ga-enwe obere mgbada, nke pụtara na ị ga-achọ otu n'ime mmadụ ole na olempịachi igwe kwụ otu ebeụdị ndị nwere atụmatụ a.
Gịnị bụ lightest foldable e igwe kwụ otu ebe?
Hummingbird mere ebili mmiri mgbe o kere ụwalightest mpịachi igwe kwụ otu eben'ụwa naanị 6.9kg, ma ugbu aeletrik-motor nyere aka nke nkasi obi na-azọrọ aha ụwalightest electric mpịachi igwe kwụ otu ebena 10.3kg, nke ka dị ọkụ karịa ụfọdụ na -eletrikBromptons.Sep 25 2018
Gịnị bụ lightest mpịachi igwe kwụ otu ebe?
Nalightest mpịachi igwe kwụ otu ebeugbu a ịzụta bụ Tern Verge X11mpịachi igwe kwụ otu ebe, nke dara na naanị 10.2kg.
Nwere ike ịnya ịnyịnya ígwè na-agba ọsọ na bọs?
Nwere ike were usoro apịpịaebe ọ bụla, n’oge ọ bụla n’ọrụ njem anyị niile. N'ihi naụgbọ ala, ọkwọ ụgbọ alanwere ikekpebie na ị gaghị ekwegịnjemọ bụrụọ karịrị akarị.
Kedu nke kacha mma foldable igwe eji eme njem?
Aophire Foldable Bike Bag (26 sentimita asatọ) PRO Bike Cover for Outdoor Bicycle Storage - XXL 2-3 Bikes - Heavy Duty Ripstop Material, Waterproof inch Bike Travel akpa Nrụgide oru 1680D Oxford Cloth ịkpakọba Bicycle na-ebu Bag obere akpa Transport
Olee otú nnukwu bụ a RockBros foldable bike akpa?
RockBros Foldable Bike Carry Bag, Black Ihe ngwugwu a na-abịa na akpa abụọ ebe otu bụ akpa ebu mgbe nke ọzọ bụ akpa paaki. Akpa igwe na-emegharị igwe ga-anabata igwe eletrik na nha sitere na 16 sentimita asatọ na 20 sentimita asatọ. Ọ ga-amasị gị n'eziokwu na akpa a nwere nnukwu mkpuchi maka igwe kwụ otu ebe.
Nwere ike a Hubless mpịachi bike dabara na a azu paaki?
Nke a Hubless mpịachi Bike nwere ike mfe dabara Na gị paaki. Egwuregwu Sada na-enweghị ọnụ na ọ nwere ike ịgbada na sekọnd ka ọ bụrụ akpa paaki. Ezubere igwe kwụ otu ebe maka ndị njem na ndị bi n’obodo ndị na-agagharị na njem ụgbọ ala na ịgba ígwè. Site n'aka Jessica Miley.
nkịta na-agba ịnyịnya ígwè
Nkịta na-agba ịnyịnya ígwè - otu esi ekpebi
Nwere ike nkịta na-agba ịnyịnya ígwè? Naanị cheta, nkịta gị ekwesịghị ịbụ otu ụdị ma ọ bụ oke iji nwee ọ spendingụ iji soro gị ịnya ịnya igwe. Ọ bụrụhaala na nkịta gị na-agba ọsọ n'akụkụ, na-ebu gị na nkata, ma ọ bụ dọrọ gị na ụgbọala na-adọkpụ, ị nwere ike ịnwe ọ timeụ n'okporo ụzọ ọnụ ka ị na-agba ịnyịnya ígwè.
Condor ịnyịnya ígwè - olee otu ị si edozi
Condor anyịnya igwe ọ bụla dị mma? Condor Super Acciaio igwe kwụ otu ebe bụ nnukwu ịzụta maka ndị chọrọ ịchọ mma na ịnya ụgbọ ala ụzọ. The British ika na-akpọ ya 'agbụrụ njikere, arụmọrụ ígwè' na-agba ịnyịnya-maara ihe ọ na-eche na na ma, dị ka na-atụ anya, ọ na-eri a obere karịa gị aluminom ma ọ bụ carbon etiti.
Harley davidson igwe eletrik
Harley davidson igwe eletrik - olee otu i si ekpebi
Ego ole bụ igwe eletrik nke Harley-Davidson? Dị ọnụ na $ 30,000, ọ bụ igwe kwụ otu ebe na ọnụ ahịa dị elu. Mana ọ dị mma iji mee ka ndị na-anya Harley laa elektrik? Harley-Davidson LiveWire na-efu ihe ruru $ 30,000. Ka anyi wepu ya n'uzo, n'ihi na o bu igodo ighota okwa eletrik Harley puru iche na njem njem uwa.6. Afrịka 2020
ibu tcr ụzọ ịnyịnya ígwè
Nnukwu igwe eji agba ọsọ tcr - azịza ya
Ego ole bụ ibu igwe kwụ otu ebe TCR?
ịnyịnya ígwè ab mgbatị
Ọkpụkpụ igwe - otu esi ekpebi
Ime mgbatị ahụ ọ dị mma maka enweghị? Ngwa ngwa ị na-eme mmega ahụ ka ọ dị mfe ọ bụla mana ịmegharị igwe kwụ otu ebe na nwayọ nwayọ na-enyekwu mkpali afọ. Mkpụrụ ndị bụ isi rụrụ ọrụ n'ụgbọ ịnyịnya bụ rectus abdominus, hips, na obliques. Idobe ụkwụ gị n’ala na-agbadata ihu ala gị. 2016 г.
dị mkpa ịnyịnya ígwè
Mkpa igwe eji agba igwe - otu esi edozi
Kedu akụrụngwa dị mkpa maka ịgba ịnyịnya ígwè dị mma? 10 cgba ígwè dị mkpa. Mbido Nchedo. Mmiri mmiri. Kwanye karama mmiri ga-enyere gị aka ide mmiri mmiri maka ịnya gị. mapụtara tube. Ọ bụ ezie na ihe nkedo nwere ike inyere gị ezigbo aka, ịnwe ọkpọkọ dochie bụ ụzọ kachasị sie ike iji mara na ị ga-adị mma ịga mgbe taya dara ada. Mgbapụta ma ọ bụ CO2. Oche akpa. Ìhè. Mkpọchi.